Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Tjörn
Tjörn waa degmada-jasiiradeed, jasiirada lixaad ee Iswiidhan ugu weeyn, waxeeyna ku taala xeebta-galbeedka Iswiidhan.
167 kiilomitir oo laba jibaaran
Stenungsund 16 kiilomitir
Uddevalla 54 kiilomitir
Göteborg 58 kiilomitir
Tjörn waxeey lee dahay dabiicad weeyn, jawi urureed iyo dhaqamed oo xiiso leh, jawi shirkadeed oo kala duwan taasi oo markii la isku geyo keeneeyso in dadka dooranaayo in ku noolaadaan badanayaan "Tjörn – jasiirada fursadaha". Mashuraacyaal badan oo dhismo ayaa socdo, isgaarsiintana waxeey keeneeysaa in si sahlan lagu tago, loogana imaado Göteborg
Xanaanada-caruurta ee degmada waxaa ku yaalo dugsiyaal xanaano, xanaanada maalmeedka ee qoyska iyo xanaanada caruurta iskulka (guriga-xilliga firaaqada).
Tjörn waxaa ku yaalo dugsiga dadka waa weeyn ee Billströmska. Halkaas waxaa ka jiro koorsooyinkaan soo socdo; koorso guud (la socoto ama la socon doorashada heesaha, masawirka ama dhar-sameeynta), barnaamijka sayinka ee asaaska, barnaamijka heesaha iyo koorska-safka ee xuquuqda da' yarta.
Gobolka Västra Götaland ayaa masu'ul ka ah daryeelka caafimaadka.
Xafiiska adeega bulshada ee degmada ayaa ka heli kartaa talobixin iyo tagero, wac Mottagningsgruppen.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha. Kooxda rugta qaabilaada.
Isgaarsiinta Tjörn waxaa ku jiro basas iyo dooman. Dooman oo si joogta ah uu socdo ayaa tago jasiiradaha sii yaryar sidii Dyrön, Åstol iyo Härön. Västtrafik ayaa ka masu'ul ah isgaarsiinta guud.
Garoonka diyaaradaha ee ugu dhow waa garoonka diyaaradaha Landvetter. Baska taga dayaarada wuxuu istaagaa shantaraalka Göteborg halkaas oo lagaga badalan karo baska tagaya Tjörn.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Tjörn